အသည်းယားစရာ ကောင်းလွန်းနေတဲ့ မေမြင့်မိုရ် ရဲ့ ပုံရိပ် များ – Shwe Yoe
အသည်းယားစရာ ကောင်းလွန်းနေတဲ့ မေမြင့်မိုရ် ရဲ့ ပုံရိပ် များ
Shwe S N | September 25, 2021 | Celebrity | No Comments
ယနေ့မှာလည်း မေမြင့်မိုရ်က ပုပ္ပါးမြို့ ရဲ့ အလှအပတွေကို နောက်ခံထားတာရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံလေးတွေ အပြင် ” စိတ်ကူးတွေထဲမှာ မင်းပဲ ရှိတယ် ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလည်း ရေးသားထားတာဖြစ်လို့ ချစ်ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုစေနိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေး လိုက် ပါတယ်နော်… ။ ကဲပရိသတ်တွေကလည်း မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ အလှလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အသည်းလေးတွေပေးခဲ့ဖို့ မမေ့လိုက် ပါနဲ့နော်…. ။
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ် ကတော့ ယခုလက်ရှိမှာ ပုပ္ပါးမြို့ကို ရောက်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သာ ယာလှပတဲ့ ပုပ္ပါးမြို့ရဲ့ ရှုခင်းတွေ ကို နောက်ခံထားကာ အသည်းယားစရာကောင်းလောက်အောင် ပိုစ့်ပေးဓါတ်ဖမ်းထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာက တစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေ ဆီကို ဝေမျှပေးလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေမြင့်မိုရ်က ဖြူဖွေးနုဖတ်ပြီး ကြည်လင် လှတဲ့ သူမရဲ့ အသားအရည်ကိုပိုမိုပေါ်လွင်ပြီး လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ပန်းနုရောင် ဖက်ရှင် အလန်းစား လေးကို ဝတ်ဆင်ထားတာဖြစ်လို့ ကြည့်မိသူတိုင်း အသည်းယားအချစ်ပိုမိစေမှာ အသေအချာပါပဲနော်။ မေမြင့်မိုရ်က မကြာခဏဆိုသလို သူမ အားလပ်တဲ့ အချိန်လေးတွေမှာ ပြည်တွင်းခရီးစဉ်တွေ သွားရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိပြီး အလှပုံရိပ်လေးတွေ ကို ဝေမျှပေးလေ့ရှိသူပါ။
ယနမှေ့ာလညျး မမွေငျ့မိုရျက ပုပ်ပါးမွို့ ရဲ့ အလှအပတှကေို နောကျခံထားတာရိုကျကူးထားတဲ့ ပုံလေးတှေ အပွငျ ” စိတျကူးတှထေဲမှာ မငျးပဲ ရှိတယျ ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလညျး ရေးသားထားတာဖွဈလို့ ခဈြပရိသတျတှေ ကွညျ့ရှုစနေိုငျရနျအတှကျ ပွနျလညျတငျဆကျပေး လိုကျ ပါတယျနျော… ။ ကဲပရိသတျတှကေလညျး မမွေငျ့မိုရျရဲ့ အလှလေးတှကေို ကွညျ့ပွီး အသညျးလေးတှပေေးခဲ့ဖို့ မမလေို့ကျ ပါနဲ့နျော…. ။
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး မမွေငျ့မိုရျ ကတော့ ယခုလကျရှိမှာ ပုပ်ပါးမွို့ကို ရောကျရှိနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ သာ ယာလှပတဲ့ ပုပ်ပါးမွို့ရဲ့ ရှုခငျးတှေ ကို နောကျခံထားကာ အသညျးယားစရာကောငျးလောကျအောငျ ပိုဈ့ပေးဓါတျဖမျးထားတဲ့ ပုံလေးတှကေို သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာက တဈဆငျ့ ပရိသတျတှေ ဆီကို ဝမြှေပေးလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မမွေငျ့မိုရျက ဖွူဖှေးနုဖတျပွီး ကွညျလငျ လှတဲ့ သူမရဲ့ အသားအရညျကိုပိုမိုပျေါလှငျပွီး လိုကျဖကျညီတဲ့ ပနျးနုရောငျ ဖကျရှငျ အလနျးစား လေးကို ဝတျဆငျထားတာဖွဈလို့ ကွညျ့မိသူတိုငျး အသညျးယားအခဈြပိုမိစမှော အသအေခြာပါပဲနျော။ မမွေငျ့မိုရျက မကွာခဏဆိုသလို သူမ အားလပျတဲ့ အခြိနျလေးတှမှော ပွညျတှငျးခရီးစဉျတှေ သှားရောကျလညျပတျလရှေိ့ပွီး အလှပုံရိပျလေးတှေ ကို ဝမြှေပေးလရှေိ့သူပါ။
မျက်နှာပြောင် ဟာသလုပ် ထား တဲ့ စိုးပြည့်သဇင် ရဲ့ အခွီ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
ပြည်သူ့အသက်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေအရောင်းအဝယ်လုပ်နေတယ် လို့ အပုတ်ချခံနေရ တဲ့ စမိုင်းလ်ရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်
ခပ်ဟော့ဟော့ဖက်ရှင်စတိုင်နဲ့ ထိထိမိမိလန်းနေ တဲ့ စူပါမော်ဒယ် J Naw